HarmonyOS: Huawei gosipụtara sistemụ arụmọrụ ya | Gam akporosis
HarmonyOS: Sistemụ arụmọrụ nke Huawei bụ nke gọọmentị
Edere Ferreno | | Huawei, Gam akporo nsụgharị
Huawei hapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ na nzukọ onye nrụpụta ya. E wezụga ịhapụ anyị EMUI 10, ụdị ọhụrụ nke oyi akwa nhazi ya, akara ndị China na-ahapụ anyị na sistemụ arụmọrụ ya. HarmonyOS bụ aha sistemụ nrụọrụ a nke akara ndị China, nke ewebatalarị n'ihu ya. Anyị mechara mata ihe niile gbasara ya.
HarmonyOS mechara bụrụ aha ahọpụtara - site n'aka Huawei maka sistemụ arụmọrụ a, dị ka akara aha na izu ole na ole gara aga. Ọ bụ sistemụ pụrụ iche pụrụ iche, ahaziri iji rụọ ọrụ na ụdị ngwaọrụ niile, ihe achọpụtalarị izu ndị a, emezuola ya.
1 HarmonyOS: Otu sistemụ arụmọrụ maka mmadụ niile
2 Asụsụ mmemme amara ama
4 Nwelite oge
5 Mwepụta HarmonOS
HarmonyOS: Otu sistemụ arụmọrụ maka mmadụ niile
HarmonyOS ka a mara ọkwa na # HDC2019! Kedụ ka anyị ga - esi wee wuo ihe eji eme ọhụụ na ahụmịhe? Kedu ka anyị ga - esi merie nsogbu nke OS ga - abịa n’ihu maka ihe ejikọrọ? Nọrọ na-ege ntị ka anyị chọpụta. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d
- Huawei Mobile (HuaweiMobile) August 9, 2019
Iji chepụta sistemụ arụmọrụ a, Huawei ahọrọla usoro microkernel, nke iji wuo sistemụ arụmọrụ site na ncha. Nhọrọ a abụghị ihe mberede na akara nke ndị China, ebe ọ bụ na dị ka ha kwuru, ọ bụ na ịbụ ụdị kernel dị modular, ọ na-enye ha ohere ịmepụta sistemụ arụmọrụ ọtụtụ ngwaọrụ.
HarmonyOS ga-arụ ọrụ na ụdị ngwaọrụ niile, yana ịnye nnukwu arụmọrụ na ha niile. Nke a bụ ihe na nwere ike hụrụ na ndakọrịta ngwa. Dị ka Huawei n'onwe ya kwadoro, sistemụ arụmọrụ ya dakọtara na ngwa na HTML, HTML5, Linux ngwa, ngwa gam akporo, edere na C ++ ma ọ bụ Kotlin. Yabụ ụwa nke ohere ga-emepe n'echiche a maka ndị ọrụ, ebe ha niile ga-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ.
Nke a bụkwa mgbanwe maka ndị mmepe. Ebe ọ bụ naanị na ha ga-emepụta ụdị nke ngwa ha maka HarmonyOS, mana enwere ike iji ya na ama, elekere ma ọ bụ kọmputa, dịka ọmụmaatụ. O doro anya na ọ na-akwado usoro a maka ndị ga-eke egwuregwu na ngwa. Ọzọkwa, dị ka Huawei kwadoro, anyị na-ahụ na-emeghe-isi iyi sistemụ (oghe oghe), ya mere na obughi nani ya.
EMUI 10 bụ ọkwa gọọmentị: Mara ozi ya niile
N'agbanyeghị nke a, akara ahụ ekwupụtala nke ahụ ebumnuche ha ka bụ iji gam akporo na ekwentị ha. Ma na ọdachi, dị ka nke na-eyi egwu oge opupu ihe ubi a, ha nwere ike ịgbanwe ozugbo na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ha. Mbugharị site na gam akporo na HarmonyOS abụghị ihe mgbagwoju anya, ha kwuru site na ụlọ ọrụ ahụ.
Asụsụ mmemme amara ama
Site na ihe nchịkọta ARK gị, sistemụ arụmọrụ na-akwado asụsụ dị iche iche nke mmemme. Anyị ahụworị ya n'ihi ndakọrịta nke ngwa ahụ, mana Huawei chọrọ imesi ike na sistemụ arụmọrụ ya ga-adaba na asụsụ mmemme a:
Java: O nwere ike ịbụ asụsụ mmemme kachasị eji eme ihe, nke na-adịgide n'agbanyeghị oge. A na-eji ya eme ihe na ngwa ngwa gam akporo
Kotlin: Asụsụ nke ewu ewu na-abawanye nke ọma wee bụrụ nhọrọ ejirila maka ịmepụta ngwa gam akporo. Ọ na-apụta maka ịdị mfe mmụta ma ọ dị ka ọ ga - abụ nke ga - eweghara Java na ahịa.
C na C ++: C na C ++ bụ nhọrọ kachasị mma gbasara arụmọrụ na njikarịcha. Asụsụ abụọ dị mkpa n'ụwa nke kọmputa, bụ ndị pụtara ìhè na arụmọrụ ha nke ọma, ọ bụ ezie na ha siri ike nghọta karịa ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ọrụ amalitelarị iji kwado ndị a Linux, HTML5 na gam akporo ngwa. Thedị ahụ ekwuola na ọ ga-ekwe omume, mana ọ bụ ihe ha dị ugbu a na-etolite na sistemụ arụmọrụ a.
N'ihi na oge mbụ, #harmonyOS ga-enwe TEE (Ntụkwasị Obi na-arụ ọrụ). Kwalite nchebe jikọtara gafee ọtụtụ ngwaọrụ amamịghe na ụwa jikọtara ọnọdụ niile # HDC2019 pic.twitter.com/o1TF54Hjkc
Huawei chọrọ iji hụ na e mere sistemụ arụmọrụ maka njikọ n'etiti ngwaọrụ na ụzọ echedoro. Ihe kachasị mkpa na nke a bụ na onye ziri ezi, na-eji ngwaọrụ ziri ezi, nwere ohere ịnweta data ziri ezi. A na-egosi HarmonyOS dị ka nhọrọ dị mma maka ndị ọrụ.
N'ezie, ekpughere ya usoro a na-eji ebe nchekwa oge echedoro (TEE: Ebe a tụkwasịrị obi na gburugburu ebe obibi). Ọ bụ ihe na-enye ohere arụmọrụ ndị e mere na mpaghara nke nhazi, nke a na-achịkwawanye yana yana arụ ọrụ ndị a dị oke mkpa na nchekwa zuru oke. N’ihi ya, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
Huawei kwadoro na HarmonyOS bụ sistemụ na ga-emelite mgbe niile. Versiondị mbụ nke ya adịlarị njikere ịmalite na njedebe nke afọ a. Companylọ ọrụ ahụ enweela atụmatụ ịmalite ụdị nke abụọ n'afọ ọzọ, ebe ụdị nke atọ ga-abata na 2021. Na ụdị ọhụụ ọ bụla, a ga-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ maka ndị ọrụ.
Na mgbakwunye, atụmatụ ndị ahụ na-eme n'ihi na mmelite ndị a na-eje ozi ka HarmonyOS ga-apụ na-agbasawanye na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaọrụ. Ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ ekwentị, kọmpụta ma ọ bụ elekere, na ndị ọzọ, ndị na-eji sistemụ arụmọrụ a.
Huawei ekwuola na a ga-ewepụta nsụgharị mbụ nke HarmonyOS n'afọ a, na njedebe nke afọ, na-enweghị ụbọchị akọwapụtara n'oge a. Ọ ga-ebu ụzọ bịa na ngosipụta mara mma nke akara ndị China, onye ebubere maka mbido ya maka njedebe nke afọ a. Companylọ ọrụ ahụ ekwenyela na n'ime afọ ndị na-abịanụ, a ga-arụ ọrụ sistemụ kachasị mma ma jiri ya rụọ ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ejiri ejiji, Huawei Vision na ebe a na-achịkwa ụgbọ ala ga-eji ya.
Na nke mbụ a, HarmonyOS ga - ahapụ ya na China. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ nke usoro okike a nke akara ndị China dị na mba ahụ. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ egosila na site na afọ na-esote atụmatụ ya bụ ịmalite usoro a n'ọtụtụ ahịa, na-agbakwunye ndakọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ezie, na 2020 kọmputa mbụ nwere sistemụ arụmọrụ a ga-akụ ụlọ ahịa. Na asịrị na n'afọ a, a ga-enwe ekwentị Huawei na sistemụ arụmọrụ ha ekwughi ihe ọ bụla ruo ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » HarmonyOS: Sistemụ arụmọrụ nke Huawei bụ nke gọọmentị
Nokia iwebata ekwenti ohuru na IFA 2019